Ogaden News Agency (ONA) – Jigjiga oo lagaso dhaweyay daggaalkii ONLF iyo wareysi lala yeeshay ciidanki falkaas fuliyay
Jigjiga oo lagaso dhaweyay daggaalkii ONLF iyo wareysi lala yeeshay ciidanki falkaas fuliyay
Wareysiga oo filim ah hoos ka daawo:::
Jigjiga ayaa aad looga soo dhaweeyay daggaalkii ay ciidamada Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeniya fuliyeen todobaadkan. Waxaana shacabka Magaaladu si aan gabasho laheyn damaashaadkooda ay kumuujinayeen laga dareemay magaalada Jigjiga. Dagaalkan Ciidamada ONLF iyo Ciidamada Gumeysiga Ethiopia ayaa ahaa mid ciidamada woyaanaha lagasoo ceydhsaday duleedka magalada jigjiga sidii loosoo ceydhsanayayna la isla soogalay gudaha magalada Jigjiga oo ah magalada ugu weyn caasimad ahaan dhulka somalida Ogadeniya ahna goob ay Saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin Gumeysiga Ethiopia oo ciidamada Gumeysiga oo aad u faro badan daganyihiin.
Waayadan danbe CWXO ayaa bartilmaameed ka dhigatay inay weeraro fool ka fool ah ku qaado xarumaha Ciidanka Gumeysiga uu magaalooyinka ku leeyahay. Weeararadan ayaa noqday kuwa qasab ah oo isdaba joog ah kadib markii ciidamada Gumeysigu ay xaruntooda dhufeyski ugu danbeyay ka dhigteen kanasoo baxi wayeen.
Hadaba sidii ay ugu suurto gashay Ciidamada ONLF inay weerarkan fuliyaan iyo tabihii daggaalkan u dhacay waxa wareysi inooga haya Radio Xoriyo iyo ICDS (Guji Sabti) oo si toos ah ciidamadii ONLF ee weeararkan qaaday inoo soo tabinaysa hoos ka dhagayso.
alxamdu lilaah marhadii latusay wax gumeystaha gaboobay